Maraatoonii Landan: Kipchogeen tokkoffaa, atileetonni Itoophiyaa ammoo 2ffaafi 3ffaa ba'an - BBC News Afaan Oromoo
Atileetiin lammii Keeniyaa Eliud Kipchogee maraatoonii seenaa keessatti saffisaan isa lamaffaadha jedhame Landanitti gaggeeffame tokkoffaa yoo bahu atileetonni Itoophiyaa ammoo 2ffaafi 3ffaa ta'anii xumuraniiru.
Moo Faaraah ammoo magaalaa guddoo biyya isaarratti 5ffaa baheera.
Atileetiin umuriin isaa ganna 34 guuteeru fi injifataan Maaraatoonii Landan bara darbee Kipchogeen bara darbe Barliin Jarmanitti dorgommii gaggeeffame irratti rekoordii addunyaa cabsuudhaan saatii 2:02:38 mo'atee ture.
Maraatoonii dubartootaatiinis atileetiin lammii Keeniyaa Brigid Kosgei mo'atteetti. Atileetiin kun umurii ganna 25 mo'achuudhaanis kan umurii xiqqaadhaan maraatoonii mo'atte ta'uu dandeesseetti.
Kosgei'tti aanuudhaan duraafi duubaan lammaffaafi sadaffaa ta'uun kan xumuran atileetota Itoophiyaa Moosineeti Garramoofi Mulee Waasihunidha.
Tokkoffaa argachuu baatanis qabxiin atileetonni Itoophiyaa maraatoonii irratti galmeessan hedduu abdii kan namatti hore ture.
Maraatoonii Landan kana irratti namoonni 40,000 uffata bifa gara garaatiin faayamanii hirmaataniiru.
Moo Faaraah'n saatii 2:05:39 galmeessisuun 5ffaa kan bahe yommuu ta'u saatii foyyaa kanaan dura qabu hanqachuun xumure.
Atileetiin Keeniyaa dorgommiirratti konkolaataan dhahame
Atileetiin Keeniyaa kopheen irraa ba'e, dorgommii mo'ate
Faaraah'n osoo dorgommiin kun walakkaarra jiruu ture kan warra mo'aterraa duubatti hafuu jalqabe.
Faaraah'n torban darbe keessa abbaa shaampiyoonaa Olompikii dachaa Hayilee Gabresillaasee waliin wal dhabanii kan turan yommuu ta'u, "dhimmi sun garuu tasa akka qalbiin koo hiramu na hin taasifne jedheera".
KJipchogeen rikoordii maraatoonii kan Landon sekondii 28 kan foyyeesse yommuu ta'u, "Ani daandii Landan irratti marsaa afraffaatiif mo'adhee seenaa hojjechuukootti gammadeera," jechuun BBC Ispoortiitti himeera.
Atileetiin Keeniyaa dorgommii Maraatoonii osoo dursaa jiru konkolaataan dhahame
IAAF: Atileetii cimaa bara 2018 badhaasuuf atileetota xumuraa 10 ifoomse
Daaymandi Liigii: Kipruutoon kopheen ittii ba'us fiigicha meetira 3000 mo'ate